Rose of Sharon: စကာင်္ပူသို့ နောက်တခေါက်
Posted by rose of sharon at 6:36 PM
ညီရဲ December 9, 2011 at 9:19 PM
အစ်မ စင်ကာပူကို ဘယ်နေ့ လာမှာလဲ...
ရောက်တုန်း ရောက်ခိုက် ဘလော့ဂါ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးလေး တွေ့ သွားနိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့ အစ်မ... တစ်ခေါက်တစ်ခေါက် လာဖို့ က လွယ်တာမှ မဟုတ်တာကို...
kokoseinygn December 9, 2011 at 9:22 PM
Nyi Linn Thit December 9, 2011 at 11:06 PM
မိသားစုနဲ့ တပျော်တပါး ခရီးထွက်ဖြစ်ဦးမယ် ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့၊ (အဲ.. ယောက္ခမတွေ ပါတာလည်း တစ်ကဏ္ဍပေါ့လေ)း) Haveasafe and mercy trip..!
Anonymous December 10, 2011 at 3:45 AM
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) December 10, 2011 at 5:50 AM
ရေးချင်သလို ရေးလည်း ဖတ်လို့ကောင်းသည် ...း)
သစ်သစ် December 10, 2011 at 7:24 AM
ကလေးလေးတွေက ဘလော့ထဲကပုံလေးတွေ ကြည့်ရင်းနဲ့ကို တဖြည်းဖြည်းကြီးလာကြတယ် မောင်နှမ၂ယောက်လုံးချစ်ဖို့ ခဏခဏလာကြည့်တယ် ..... ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာစင်္ကာပူခရီးစဉ် ဖြစ်ပါစေ အမ...
မဒမ်ကိုး December 10, 2011 at 8:40 AM
လာလည်သွားတယ်နော် အမ ..စလုံးရောက်ရင် အချိန်မရွေး လာလည်ပါနော် ..သတိရရင်ခေါ်လိုက်ပါ
မြူးမြူး December 10, 2011 at 8:58 AM
မမရေ.. တွေ့ချင်သေးတယ်.. ဟိုတခါက ဘာမှမကျွေးလိုက်ရဘူး..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 10, 2011 at 8:26 PM
blackroze December 11, 2011 at 12:21 AM
ညိမ်းနိုင် December 11, 2011 at 11:30 AM
ရှင်ကျားပူမှ နောက်တစ်ကြိမ် လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျား.....။
အိမ်မက်စေရာ December 11, 2011 at 8:01 PM
ဘာပဲပြောပြော ခရီးထွက်တာ ကောင်းပါတယ်...အတွေ့အကြုံသစ်နဲ့ စိတ်သစ် လူသစ် ဖြစ်သွားတာပေါ့..
မြသွေးနီ December 12, 2011 at 5:09 PM
mstint December 12, 2011 at 9:28 PM
Rose ရေ။ စင်္ကာပူရောက်ရင် ဘလော့ဂါတွေနဲ့ ဆုံဖြစ်အောင်
ဆုံလိုက်နော်။ အားလုံးက ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး နွေးနွေးထွေးထွေးရှိကြတယ်။
khaing December 13, 2011 at 8:37 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရီးဖြစ်ပါစေ။ ကလေးလေးတွေ နှစ်ယောက်စလုံးက အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတာဘဲနော်။ အရမ်းထွားလာကြတယ်။ နောက်မှ ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ပေးပါအုံးနော်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 14, 2011 at 12:13 AM
နာတယ်ကွာ....ညီမလေးက စင်္ကာပူကမဟုတ်တာ...မဟုတ်ကို မမကို လိုက်ရှာနေမှာ...:):) မမရေ ပျော်ရွင်ဖွယ်ခရီးစဉ်လေး ဖြစ်ပါစေလို့..ဆန္ဒပြုရင်း..
Junemoe December 14, 2011 at 7:56 PM
ဖြစ်နိုင်ရင် ဘလော့ဂါတွေနဲ့ ဆုံလိုက်ပါ အမရေ... နော်ဆို အရမ်းဆုံချင်တာ... :)
jasmine(တောင်ကြီး) December 15, 2011 at 4:43 PM
ကလေးလေးတွေ နှစ်ယောက်စလုံးက အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတာဘဲနော်။